के विवाहपश्चात् हस्तमैथुन गर्नु सामान्य कुरा हो ? - यौन जिज्ञासा र समाधान - साप्ताहिक
के विवाहपश्चात् हस्तमैथुन गर्नु सामान्य कुरा हो ?
प्रश्न : मेरो उमेर ३५ वर्ष हो । म वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विगत ८ वर्षदेखि युएईको अबुधाबीमा सेक्युरिटी जबमा छु । मलाई धेरै यौनसम्पर्कको आभास हुन्छ र हस्तमैथुन गर्ने आदत परेको छ । यद्यपि रियलमा सेक्स गर्दा मलाई उत्तेजना हुँदैन । मेरो विर्य आउन पनि धेरै टाइम लाग्छ, अर्थात् सन्तुष्टि महसुस हुँदैन । म हस्तमैथुनबाट टाढा हुन चाहान्छु । कतै यसले गर्दा त मलाई यस्तो फिल भएको होइन?
अहिले अबुधाबीमा भए पनि तपाईंले रियल सेक्स अर्थात् वास्तविक यौनसम्पर्क आफ्नी श्रीमतीसँगै गर्नुभएको हो भन्ने आधारमा जवाफ लेख्ने प्रयास गरेको छु ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घर–परिवार, विशेष गरेर श्रीमतीबाट टाढा बस्दा अन्य कठिनाइका साथै यौनसम्बन्धी अनेक असजिलोलाई पनि सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । अन्य कतिपय असजिलालाई सजिलै भन्न सकिने भए पनि यौनसम्बन्धी असजिलोपनको चर्चा गर्न त्यति सहज छैन । तपाईंलाई त्यहाँ असजिलो भएजस्तै यहाँ तपाईंकी श्रीमतीलाई पनि पक्कै असजिलो भएको हुनुपर्छ, जुन कुरा तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको छैन ।
घरपरिवारवाट टाढा हुँदा मानिसहरू यौनेच्छा शान्त पार्न अनेक उपाय अपनाउँछन् । यौनेच्छा शान्त पार्न नै देहव्यापारी महिलासँग सम्पर्क गर्दा एचआईभीलगायत अनेक यौनरोग लागेर देश फर्कनेहरू पनि उत्तिकै छन् । कमाएको पैसा उतै रमाइलोमा सकेर आउनेहरू पनि छन् । तपाईंको रोजगारी भएको देशमा यस्ता कार्यमा संलग्न हुन अन्य कतिपय देशको तुलनामा सजिलो नहुन सक्छ ।
तपाईंले हस्तमैथुनलाई यौनेच्छा शान्त पार्ने उपाय बनाउनुभएको रहेछ जुन कतिपय कारणले निकै राम्रो मान्नुपर्छ । यसले अनावश्यक रूपमा खर्च हुने पैसा र समय त जोगाउँछ नै, गोपनीयता पनि भङ्ग हुन दिँदैन । अन्य कुनै व्यक्तिसँग सम्पर्क नहुने भएकाले एचआईभी वा अन्य कुनै यौन रोग लाग्ने कुरा पनि भएन । हस्तमैथुन आफैंले गरिने भएकाले यसमा अनेक यौन परिकल्पना जोड्न सकिन्छ जसले थप यौन आनन्द प्रदान गर्न सक्छ ।
किशोरावस्थामा हुँदा आफ्नो यौनतनाव कम गर्ने कुनै अन्य उपाय नहुँदा हस्तमैथुनकै सहारा लिनुपर्ने स्थिती भए पनि विवाहपछि यौनसम्पर्कको माध्यमबाटै यौन आनन्द प्राप्त गर्न सकिने भएकाले पनि हस्तमैथुन गर्ने कार्यमा केही कमी आउँछ, तर यसको अर्थ यो पनि होइन कि विवाह हुँदैमा उसले हस्तमैथुन गर्न विल्कुलै बन्द गर्छ । विवाहित व्यक्तिहरूले विभिन्न परिस्थिति विशेष गरी नियमित रूपमा यौनसम्पर्क राख्न नपाएको स्थितीमा आफ्नो यौनचाहना पूरा गर्न हस्तमैथुनको सहारा लिन्छन् र यो एकदमै सामान्य प्रक्रिया हो ।
हस्तमैथुन गर्ने कार्यमा अभ्यस्त भएपछि कतिपय व्यक्तिले कसरी आफू सजिलै यौन चरमसुखको स्थितिमा पुग्ने भन्ने कुरा सिक्छन् र यसको वारम्बार प्रयोग गर्न थाल्छन् । तपाईंले हस्तमैथुन गर्ने क्रममा यस किसिमले गर्दा सजिलै बढी यौनआनन्द आउँछ भन्ने कुरा पनि सिकिसक्नुभएको हुनुपर्छ । श्रीमती नै भए पनि अर्को व्यक्तिसँगको यौनसम्पर्क त फरक पर्ने नै भयो । हस्तमैथुन गर्दा आफूले चाहेअनुसार छोटो समयमा चरमसुखको स्थितिमा पुग्न सकिन्छ र सबै कार्य आफ्नै नियन्त्रणमा हुन्छ, जुन अर्को व्यक्तिसँगको यौनसम्पर्कमा हुने कुरा भएन ।
के गर्दा ठीक होला ?
तपाईंलाई थाहै होला, महिलालाई यौन चरमसुखको चरणसम्म पुग्न पुरुषको तुलनामा केही बढी समय लाग्न सक्छ । यस्तो स्थितिमा लिङ्ग योनिमा पसाउनुभन्दा पहिले पाक्क्रीडामा संलग्न गराउने सल्लाह दिइन्छ । पुरुषहरू यौन चरमसुख प्राप्त गरेपछि शिथिल हुन्छन् भने महिलाले एकभन्दा बढी चरमसुख प्राप्त गर्न सक्छन् । एकपल्ट विचार गरौं न, वास्तविक यौनसम्पर्क तपार्इंकी श्रीमतीसँग हुँदैछ र यहाँ तपाईंको दायित्व उहाँलाई यौन चरमसुख प्राप्त गर्न सहयोग गर्नु पनि हो ।
यस्तो स्थितिमा तपार्इंले भन्नुभएको यो समस्या त समाधानको उपाय नै हुन सक्छ । तपाईंले यौनेच्छा भएको र हस्तमैथुनबाट त्यसलाई शान्त पार्ने गर्नुभएको कुराले तपाईं यौन उत्तेजित हुने कुरा देखाउँछ नै । अर्को व्यक्तिसँग यौनसम्पर्क गर्दा पनि हस्तमैथुनमा जस्तै यौन परिकल्पना अनि विविध स्थान र समयमा यौनक्रिया गर्ने अनि विविध आसनको प्रयोगबाट तपाईंले यौन उत्तेजनालाई उच्च स्तरमा राख्न सक्नुहुन्छ । श्रीमान्–श्रीमतीबीचको यौन क्रियाकलाप लिङ्ग–योनि सम्पर्कमा मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने छैन । यसमा विविधता ल्याउन सकिन्छ । पाक्क्रीडाका दौरान एक–अर्काको यौनाङ्ग हातले चलाउने वा हस्तमैथुनमा सघाउने जस्ता कुरा प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ ।
श्रीमतीलाई पनि आफ्नो हस्तमैथुन गर्ने क्रममा संलग्न गराउनु राम्रो उपाय हुन सक्छ । श्रीमतीलाई तपाईंले गर्ने हस्तमैथुनको मूकदर्शक नबनाई यो सबै प्रक्रियालाई पाक्क्रीडासँग गाँसेर श्रीमतीको संलग्नता गराउन सक्नुहुन्छ । हस्तमैथुन गर्दा जसरी तपाईंले आनन्द प्राप्त गर्नुहुुन्थ्यो ती कुरा तपाईंकी श्रीमतीले गरिदिने स्थिति भए तपाईंले यौनसुख पाउन सजिलो त हुने नै भयो र यो क्रिया श्रीमतीसँगको
यौनसम्पर्कका साथ अगाडि बढ्ने भयो, जसले तपाईंहरू दुवैलाई यौनआनन्द प्राप्त गर्न सघाउन सक्छ । तपाईं स्खलित भएपछि श्रीमतीसँगको यौनसम्पर्क असजिलो हुनसक्छ, त्यसैले पहिले श्रीमतीले चरमसुख प्राप्त गर्ने र पछि तपाईंले यो कार्यमा संलग्न भएर वा आलोपालो गरेर यस्तो क्रियाकलाप गरे पनि राम्रै हुन्छ । अर्को कुरा, तपार्इंलाई वीर्य स्खलन हुन समय लाग्ने हो भने तपाईंले यौनसम्पर्कको समय लम्ब्याउन सक्नुहुन्छ जुन यस्तो स्थितिमा वरदान नै सावित हुन सक्छ ।
प्रकाशित :माघ ११, २०७३